सन्दीपको छलाङ्देखि शिक्षकहरुको संघर्षसम्म - Kendrabindu Nepal Online News
श्रम शोषण ! बाल विकास शिक्षकको मासिक तलब ६ हजार
कैलालीकी पार्वती धमला २०५१ सालदेखि बाल विकास शिक्षिकाको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँले सुरुमा साना बालबालिकालाई पढाए बाफत मासिक रुपमा ५ सय रुपैयाँ पाउनुहुन्थ्यो । बाल विकास शिक्षिकाको रुपमा काम गर्न थालेको २४ वर्षपछि उहाँलदे मासिक ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ । त्यस्तै निर्मला तिमिल्सेनालाई बाल विकास शिक्षिकाको रुपमा काम गरेको १३ वर्ष नै पुग्यो । उहाँले अहिले पाईरहेको पारिश्रमिकले एक जोर राम्रो लुगा पनि किन्न पनि मुस्किल पर्छ । ‘यो ६ हजारले त एक जोर राम्रो लुगा किनु भनेपनि आउँदैन् । नत राम्रो खाना खान नै पुग्छ ।’ अनि हामीले के श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पनि नपाउने ? उहाँको प्रश्न छ ।
उहाँले त्यही मासिक आउने ६ हजार रुपैयाँले ८ जनाको परिवार पाल्दै आउनुभएको छ । एकातिर बालबालिकाको भविश्य निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर आफ्नै घरपरिवारसँग संघर्ष गर्नुपर्ने बाल विकास शिक्षक/शिक्षिकाहरुको बाध्यता छ । ‘आफ्नो सक्रिय अवस्थामा बालबालिकाको भविश्य बनाउन लाग्यौं । अब बुढेसकालमा रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने ! यस्तो बिडम्बना ? यो तलबले त कसरी हामीले खर्च चलाउँने । या त राज्यले ६ हजार अनुसारको बजार व्यवस्थापन गरिदिनुपर्‍यो । होईन भने हाम्रो सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुर्‍यो ।’ उहाँले आक्रोशित मुद्रामा गुनासो गर्नुभयो ।
यस्तो डरलाग्दो मूर्ति, निस्केको दिन युग समाप्त ! (भिडियोमा)
तपाईंले पशुपतिनाथ मन्दिरको ठीक पूर्वतिर बाग्मती नदीको किनारमा उभिएको एउटा मूर्ति नियाल्नु भएको छ ? यो मूर्ति जमीनमा आधा मात्र देखिन्छ । र, विश्वास गरिएको छ, यो मूर्तिको आधा भाग जमीन भित्र छ । एउटा रोचक भनाइ छ, कि यो मूर्ति क्रमश: निश्कदैछ । र डरलाग्दो भविष्यबाणी गरिन्छ, यो मूर्ति पूर्णरुपमा निस्किएका दिन यो युग नै सकिन्छ । अर्थात सकिन्छ कलियुग । यस्तो डरलाग्दो भविश्यबाणी गर्ने मूर्तिको नाम हो, बिरुपाक्षको मूर्ति । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कलिको मूर्ति ।
१२ सय दिव्य वर्षको एक कलियुग मानिएको छ । कलियुगको शुरुवात शास्त्रहरुका अनुसार महाभारत युद्ध सकिएको केही वर्ष पछि ३१३७ ईसा पूर्वमा भएको थियो । कृष्णको यो युद्धको ३५ वर्षपछि देहान्त भएको थियो, जसपछि कलियुगको आरम्भ भएको विश्वास गरिन्छ । कलियुगमा भगवान विष्णुको दशौं अवतारको रुपमा कल्किको प्रभाव रहेको विष्णु पुराणमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘रविन्द्र र मेरो मायाको सम्बन्ध राजनीतिले जोड्यो’- विद्या भट्टराई
ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीको निवास, पोखरामा आज श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । मन्त्री अधिकारीको सातौ दिनको पुण्य तिथीमा श्रद्धाञ्जलि सभा आयोजना गरिएको हो।
‘क्रिकेटर अफ दी इयर’को उपाधि सन्दिपलाई
क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेले ‘क्रिकेटर अफ दी इयर’को पुरुष तर्फको अवार्ड जितेका छन । नेपाली क्रिकेटलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन महत्वपुर्ण योगदान पुर्याएका सन्दिपले विश्वका हरेक लिगमा खेलेका छन । पछिल्लो एक बर्षमा सन्दिप घरेलु मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय फ्रेन्चाइजी लिगमा पनि तहल्का मच्चाएका छन । उनले गत बर्ष कुल ३२ खेल ८४ विकेट लिएका थिए । दिपेन्द्र ऐरी, करण केसी, सोमपाल कामी, पारस खड्कालाई पछि पारे ।
अस्थायी तथा राहत शिक्षकहरुको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसले समर्थन जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले बिज्ञप्ति नै जारी गरेर माग पूरा गर्न आग्रह गरेको हो।
‘नेपाल सरकारलाई राहत शिक्षकहरुको माग पुरा गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दल जोडदार माग गर्दछ।’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । साथै कांग्रेसले शान्तिपूर्ण रुपले प्रदर्शन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार माथि वर्तमान सरकारले अंकुश लगाउने कार्य गरिरहेकोमा विरोध जनाएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘ यस घटनाले सरकारको निरकुंश चरित्रलाई उदाङगो बनाएको छ ।’
स्वतः स्थायी ! कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा ?
भर्खरै सामाजिक संजालमा पोष्ट भएको एउटा भिडियो हेरें । एक हुल करारमा काम गरिरहेका महिला पुरुष आन्दोलन गरिरहेका थिए। त्यो आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिनलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरिरहेको थियो। र, त्यो घटनामा केही मान्छे घाईते भएका थिए । पत्रकारहरु त्यो आन्दोलनको दृश्य जस्ताको त्यस्तै उतार्न तल्लिन थिए । पत्रकारको सक्रियता नहुदो हो त मैले त्यो अब्यबस्थाको त्यो चरम रुप हेरेर आफ्नो बिचार ब्यक्त गर्न पाउने नै थिएन । तसर्थ पनि पत्रकारहरु धन्यबादका पात्र हुन् ।
बुझ्दै जाँदा त्यो आन्दोलन सरकारबाट करारमा नियुक्ति पाएका शिक्षा क्षेत्रका शिक्षकहरुको आन्दोलन रहेछ । आन्दोलनको माग ‘स्वतः स्थायी हुनुपर्ने’ रहेछ । उनीहरुको आन्दोलन किन ? यो प्रश्न बुझ्न नभ्याउदै सुन्न पाएको ‘स्वतः स्थायी’ भन्ने मागले मलाई अचम्भित मात्र बनाएन । हाम्रो देश कतिसम्मको अब्यबस्थाबाट गुज्रिरहेको रहेछ भन्ने उदाहरण समेत हो यो ।
कसैलाई मानव संसाधन आवस्यक पर्छ तर त्यो आवस्यकता दिर्घकालिन होइन भने जुनसुकै कम्पनी फर्म वा सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गर्दछ । त्यसरी करारमा नियुक्ति लिनु या दिनु भनेकै निश्चित समयको लागि मात्र हुन्छ । तत् सम्बन्धि ‘ट्रम्स कन्डिसनहरु त्यो करारनामा अथवा सम्झौता पत्रमा स्पष्टसंग लेखिएको हुन्छ । र, त्यसलाई पालन गर्नु दुवै पक्षको दायित्व हुन आउछ ।
पोखरामा लगातार प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना, आज पनि एक जनाको मृत्यु
सरकार र ग्यास व्यवसायीबीच सहमतिको प्रयास
दि ब्रेकअपः न पीडा न डुबुल्की
Bidhya bhattarai, Birupaksh temple, ecd teacher, kendrabindu main news, rabindra adhikari, Sandip Lamichhane, Teacher strike, the break up film
Prevश्रम शोषण ! बाल विकास शिक्षकको मासिक तलब ६ हजार
प्याड लगाउँन सिकाउँदै अभिनेत्री प्रियंका (भिडियोमा)Next